GoldenEye (1995) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 7.2/10 238185 votes
June Randall, Martin Campbell
Alan Cumming, Famke Janssen, Gottfried John, Izabella Scorupco, Joe Don Baker, Judi Dench, Pierce Brosnan, Robbie Coltrane, Sean Bean, Tchéky Karyo
ဒီ ဇာတျကားကတော့ မငျးသား Pierce Brosnan ရဲ့ ပထမဆုံး ဂြိမျးဈဘှနျးဇာတျကားဖွဈပါတယျ..သူ့ရဲ့ ဘှနျးဇာတျကား ၄ ကားထဲမှာ Rating အမွငျ့ဆုံးဇာတျကားဖွဈပွီး လူသတျမှုအမြားဆုံး ဘှနျးဇာတျကားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျထားတဲ့ဇာတျကားပါ…
Pierce Brosnan ရဲ့ဘှနျးဇာတျကောငျကို ပရိတျသတျတျောတျောမြားမြားနှဈသကျကွောငျးတှရေ့ပါတယျ…ကွငျအငျလက်ခဏာ…တညျငွိမျမှု..ဝတျစားဆငျယငျမှု..သရုပျဆောငျမှုတှအေရPierce Brosnan နဲ့ ဘှနျးကို တဈထပျတညျးကိုကျညီစတေဲ့ ရသကို ပေးစှမျးနိုငျခဲ့တာပါ….
နောကျတဈခကျြက သူ့ရဲ့ဇာတျကားတှမှော Action ပိုငျး အတျောလေး ပွညျ့စုံတာကို တှရေ့မှာပါ..IMDb Rating (7.2/10) ရရှိထားပါတယျ…။
ဒီ ဇာတ်ကားကတော့ မင်းသား Pierce Brosnan ရဲ့ ပထမဆုံး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်..သူ့ရဲ့ ဘွန်းဇာတ်ကား ၄ ကားထဲမှာ Rating အမြင့်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး လူသတ်မှုအများဆုံး ဘွန်းဇာတ်ကားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ…
Pierce Brosnan ရဲ့ဘွန်းဇာတ်ကောင်ကို ပရိတ်သတ်တော်တော်များများနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်…ကြင်အင်လက္ခဏာ…တည်ငြိမ်မှု..ဝတ်စားဆင်ယင်မှု..သရုပ်ဆောင်မှုတွေအရPierce Brosnan နဲ့ ဘွန်းကို တစ်ထပ်တည်းကိုက်ညီစေတဲ့ ရသကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ….
နောက်တစ်ချက်က သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ Action ပိုင်း အတော်လေး ပြည့်စုံတာကို တွေ့ရမှာပါ..IMDb Rating (7.2/10) ရရှိထားပါတယ်…။
June Randall Martin Campbell
Alan Cumming Famke Janssen Gottfried John Izabella Scorupco Joe Don Baker Judi Dench Pierce Brosnan Robbie Coltrane Sean Bean Tchéky Karyo
Alan Cumming Billy J. Mitchell Constantine Gregory Desmond Llewelyn Famke Janssen Gottfried John Izabella Scorupco Joe Don Baker Judi Dench Juliet Forester Kate Gayson Mark Chapman Michael Kitchen Michelle Arthur Michelle Eldridge Minnie Driver Olivier Lajous Pavel Douglas Peter Majer Pierce Brosnan Ravil Isyanov Robbie Coltrane Samantha Bond Sean Bean Serena Gordon Simon Kunz Simone Bechtel Tchéky Karyo Trevor Byfield Vladimir Milanovich
Option 1 yuudrive.me 617 MB SD (480p)
Option2sharer.pw 617 MB SD (480p)
Option3server.mfile.cloud 617 MB SD (480p)
Option4server.mfile.cloud 1.5 GB HD (1080p)
Option7server.mfile.cloud7GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 8 sharer.pw7GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option9yuudrive.me7GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Ong-bak3(2010) 2010
The Bad Guys: The Movie (2019)